औंला पट्काउने बानी छ? तुरुन्तै छो’डिदिनुस् यो बानी, हुनसक्छ यस्तो हानी – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / औंला पट्काउने बानी छ? तुरुन्तै छो’डिदिनुस् यो बानी, हुनसक्छ यस्तो हानी
औंला पट्काउने बानी छ? तुरुन्तै छो’डिदिनुस् यो बानी, हुनसक्छ यस्तो हानी
admin November 10, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 134 Views
हामी सबैको एउटा नराम्रो साझा बानी हुन्छ, त्यो हो औंला पट्काउने। टि’बी हेर्दा, कुराकानी गर्दा, कुनै प्रस्तुति दिँदा, आतिँदा होस् या त थोरै फुर्सद होस् हामी औंला पट्काउन थाल्छौँ। औंलाहरू दुख्दा पनि हामी पट्काइहाल्छौँ।
यसो गर्दा दुखाइ कम भएको म’हसुस पक्कै पनि हुन्छ। यदि तपा’ईंको पनि यस्तो नराम्रो बानी छ भने यसलाई आजै हटाउनुहोस्। किनभने यो बानी हाम्रो स्वा’स्थका लागि निकै हानिकारक छ।
डक्टरका अनुसार, हात र औंलाहरू पट्काउँदा हा’म्रो हड्डीमा नराम्रो असर पर्छ। यसका साथै दैनिक काम गर्ने क्षमतामा पनि कमी आउँछ। हाम्रो शरीरमा जोर्नीहरू हुन्छन् र ती जोर्नीहरूमा एउटा खास किसिमको तरल पदार्थ पाइन्छ। यो तरल पदार्थले हाम्रो शरीरका हड्डीहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ।
synovial fluid नामक तरलले हाम्रो शरीरमा ग्रीसको काम गर्दछ। यसले हड्डीहरूलाई एक आपसमा रगडिनबाट पनि जोगाउँछ। यस तरल पदार्थमा निहित ग्या’सबाट नयाँ ठाउँमा कार्बनडाइअक्साइड बन्छ र यसले फोकाहरू उमार्छ। जब हामीले औंला पट्काउँछौँ ती फोकाहरू फुट्छन् जसका कारण हाम्रो स्वास्थमा नराम्रो असर पर्दछ।
अधिकारीहरूका अनुसार, औंला पट्काउँदा गाँठाको सम’स्या हुन सक्छ। एउटा रिपोर्टले बताए अनुसार, हड्डीहरू आपसमा लिगामेंटले जोडिएका हुन्छन्। बारम्बा’र हामीले औंला पट्काएमा यसबाट आउने sunovial fluid नामक तरल कम हुन थाल्छ। यस्तो लगा’तार गरेमा हामीले जिन्द’गीभर गाँठाको समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
एउटा अध्यय’नले देखाए अनुसार, औंला पट्काउँदा हात सुन्निने, गाँठाहरू बढ्ने, अररो हुने तथा गिर्खा देखिने समस्या हुन सक्छ। लामो समयसम्म औंला पट्काएमा हाम्रा औं’लाहरूले काम गर्न बन्द गर्नेजस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। त्यसैले आजै यो नराम्रो बानी त्यागौँ। स्वस्थ बनौँ।
Previous टिकटकमा भाईरल ६० बर्षकी आमा कृष्ण तामाङ पहिलो पटक मिडियामा । हसाएरै मुर्छा पारिन्, यस्तो भएपछि अन्तर्वार्तामै धरधरी रोईन (भिडियो हेर्नुस)
Next महिला होस् या पुरुष, नुहाउनै पर्छ यी ४ काम सकेपछि : शास्त्र Posted on